CAJIIB: Gooldhaliyaha Taariikhda Premier League Ugu Sarreeya Ee Alan Shearer Oo Kaliya SIDDEED Eray Kusoo Koobay Dooda Soo Jireenka Ah Ee Kala Duwanaanshaha Ronaldo Iyo Messi. - Gool24.Net
December 9, 2018 Apdihakem Omer Adem
Halyeeyga kubadda cagta England ee Alan Shearer oo ah shaqsiga haysta rekoodhka gool dhalinta abid ee horyaalka Premier League ayaa markiisa ka hadlay farqiga u dhaxeeya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo.
Labadan xiddig ayaa ah kuwo cajiib ah isla markaana hoggaan kasoo ahaa kubadda cagta kaddib inay kusoo wada guuleysteen min shan Ballon d’Or.
Labadan xiddig ayaan kaliya samayn shardiga ah inay ku guuleystaan Koobka Aduunka iyaga oo xagaagii dhawaac soo ciyaaray tartankaas oo la filayo inuu noqdo markii ugu dambeeyay ee ay ka qayb qaadanayeen.
Ronaldo ayaa qaab wanaagsan kula bilawday xulkiisa kaddib inuu afar gool dhaliyay labadii kulan ee ugu horreeyay, Dhinaca kale Messi ayaa la dhibtooday xulkiisa Argentina balse ugu dambayn labada xulba waxa tartanka lagaga saaray wareega 16-ka.
Haddaba, Shearer ayaa ka cararay wax buun-buunin ah oo uu midkood ku sameeyo waxaana uu labada xiddigba u amaanay si guud isaga oo sideed eray kusoo koobay farqigooda.
Alan waxa uu sheegay in Messi uu yahay far-shaxan kubadda cagta ah halka uu Ronaldo ku sifeeyay mashiin dhinaca gool dhaalinta ah.
Xiddigii hore ee Newcastle United ayaa yidhi isagoo la hadlayay BBC Sport “Messi waa farshaxan, Ronaldo waa mashiin gool dhalineed”